Ubuninzi bokubambisa ubhedu-umatshini wokufudumeza ngaphakathi | izisombululo zokungenisa ubushushu
ukugqithiswa kwebhanki ephezulu
Isantya esiphezulu sokungenisa ityhubhu yentsimbi ukuya kwintsimbi efanelekileyo
Isantya esiphakamileyo sokungenisa ityhubhu yentsimbi yokufaka isinyithi kwiinjongo zentsimbi. Izinto zokusebenza: Ityhubhu yentsimbi yentsimbi efanelekileyo yokuhombisa usebenzisa uLucas-Milhaupt Easy FLO 6 brazing alloy ring kunye… Funda ngokugqithisileyo
iindidi Teknoloji tags Ityhubhu yentsimbi ebhulayo, ukufakwa kwamaza okuqhuba rhoqo, ibhanti ephezulu, I-Frequency Brazing steel steel, ukugqithiswa kwebhanki ephezulu, ukukhangela ibhondi, induction brazing steel, ukutyunjwa kwebhanki yentsimbi kwintsimbi, ityhubhu yentsimbi, ityhubhu yentsimbi ukuya kwintsimbi efanelekileyo
Induction Umatshini weBrazing kunye nezixhobo zokuSoldering
Isigaba esisodwa se220V
iindidi Teknoloji tags Isixhobo se-HF sokujonga, ibhanti ephezulu, iyunithi ephezulu yokugquma, ukugqithiswa kwebhanki ephezulu, heater ephezulu yokuthengisa, ukukhangela ibhondi, izixhobo zokusebenza zokujonga ukukhanya, ukufakwa kwiziko elivuthayo, i-heating brazing heater, umshini wokukrazula, inkqubo yokubhikisha, Inkqubo yokugqogqa, Ukuhamba rhoqo kwerediyo kubhedu, isandisi-lizwi serediyo evutha njalo, RF ibhondi, Umatshini wokujonga iRF
Kutheni ukhetha ukuchithwa kweBlacking?
Itekhnoloji yokufudumeza induction ngokuthe chu ukushenxisa amadangatye avulekileyo kunye nee-oveni njengowona mthombo wobushushu ukhetha ubhedu. Izizathu ezisixhenxe eziphambili zichaza oku kuthandwa kukhulayo:
1. Isisombululo esiphezulu
Ukutshisa ukufudumeza kudlulisa amandla ngakumbi kwisikwere semilimitha kunelangatye elivulekileyo. Ukubeka ngokulula, ukungeniswa kunokukhangela ngakumbi iinxalenye ngeyure kuneenkqubo ezizezinye.
Induction ilungele ukudityaniswa komgca. Iibhetshi zamacandelo akusafuneki ukuba zithathwe zibekwe bucala okanye zithunyelwe ngenjongo yokuhombisa. Ulawulo lwe-elektroniki kunye neekhoyili ezenziwe ngokwezifiso masidibanise inkqubo yokuhombisa kwiinkqubo zemveliso engenamthungo.
3. Umsebenzi ohambelanayo
Induction Ukufudumeza kuyalawuleka kwaye kuyaphinda. Ngenisa iiparameter zenkqubo oyifunayo kwizixhobo zokungenisa, kwaye iyakuphinda ujikeleze imijikelezo yokufudumeza ngaphandle kokuphambuka.
4. Ulawulo oluyingqayizivele
Ukuchithwa kuvumela abaqhubi ukuba bajonge inkqubo yokukhangela, into enzima ngamadangatye. Oku kunye nokufudumeza ngokuchanekileyo kunciphisa umngcipheko wobushushu, obangela amalungu adibeneyo.
5. Indawo engcono kakhulu
Amalangatye avulekileyo enza ukuba iimeko zokusebenza zingakhululeki. Ukuziphatha kwabaqhubi kunye nemveliso ziyahlupheka ngenxa yoko. Induction ithe cwaka. Kwaye akukho nto inyukayo kwiqondo lobushushu.
6. Beka isikhala sakho ukusebenza
Izixhobo ze-DAWEI zokwenziwa ngobhedu zinendawo encinci. Izikhululo zokungenisa zibeka ngokulula kwiiseli zemveliso kunye nolwakhiwo esele lukhona. Kwaye iinkqubo zethu ezihlangeneyo, eziziiselfowuni zikuvumela ukuba usebenze kwiindawo ekunzima ukufikelela kuzo.
7. Inkqubo yoqhagamshelwano
Ukuchithwa kuvelisa ubushushu ngaphakathi kwesiseko sesinyithi-kwaye akukho ndawo. Yinkqubo yoqhakamshelwano; iziseko zesinyithi azizange zidibane namalangatye. Oku kukhusela isinyithi esisisiseko ekujijweni, okuthi emva koko kwandise imveliso kunye nomgangatho wemveliso.
iindidi FAQ tags inzuzo yokuqheliswa kwebhere, ukukhangela ibhonti, ukugqithiswa kwebhanki ephezulu, ukugqithisa ukukhangela, RF induction brazing, Kutheni i-brazing ibhetele, Kutheni ukhetha ukuchithwa kweBlacking?
I-Brazing Cutting Tool kunye ne-Induction
Iibrazing Cutting Tools nge-Induction
Injongo: Ukukhangela ikhonksi kunye ne-shaft kwisixhobo sokusika
AbaThengi boMthengi banikezele iinxalenye
Ukushisa okubonisa ukupenda kweBraze
Ubushushu 1300 - 1400 ºF (704 - 760 ° C)
Ukuphindaphinda 400 kHz
Izixhobo: I-DW-UHF-6kw-I, i-250-600 kHz inkqubo yokufudumala yokufakelwa kwe-induction, kubandakanywa isikhululo sokushisa esikude usebenzisa i-0.66 μF (i-1.32 μF epheleleyo). .
Inkqubo: Iisethi ezimbini zeengxenye zifakwa kwiikhoyili nganye. I-braze preforms ifakwa kwi-cone ngokudibeneyo. Icandelo elihlanganisiweyo lifakwe ngaphakathi kwe-coil yokucima i-coil kunye nokufudumala de kube i-braze iyancibilika.
Iziphumo / IiNzuzo: ukucwangciswa kwecoil esebenzayo kwenza ukufudumala kwangaphandle kwamalungu amabini kwindlela eyodwa ye-2kW. Ubhondi obini bufezekiswa ngexesha lexesha elifunekayo, ukwandiswa kwenkqubo
iindidi Teknoloji tags sixhobo sokusika, I-Brazing Cutting Tool kunye ne-Induction, sixhobo so kubhaka, sixhobo so kubhena, ukugqithiswa kwebhanki ephezulu, Ukuchithwa kwesibhakabhaka sixhobo sethusi, sixhobo so kubhaqa